Microsoft kwuru na United States na-emeso Huawei ihe n'ụzọ na-ezighi ezi | Gam akporosis
Donald Trump bụ onye isi nke atụmatụ niile gọọmentị America nyere Huawei, nke bụ maka igbochi ụfọdụ ọrụ na mmekọrịta nke ụlọ ọrụ China nwere n'oge ọ dị adị na ụlọ ọrụ dị iche iche na mba America, gụnyere Google, onye isi ya na ụwa gam akporo. Ọ dabere na mmachibido ire na iji ụfọdụ ngwaahịa na mba ahụ, bụ nke jọgburu onwe ya nye ọtụtụ n'ime ndị na-akwado akara a na-ebi ebe ahụ.
O doro anya na, dị ka United States na-ekwusi ike, Huawei anọwo na China na-enwe mmekọrịta na-enyo enyo na nledo na China, otu n'ime ndị na-asọmpi akụ na ụba ugbu a nke United States onye ya na ya nwere nsogbu. Ya mere, o kwupụtara Huawei dị ka ụlọ ọrụ na-enweghị nchebe na ntụkwasị obi nke na-enye nnukwu ihe egwu nke ịghapụ ozi na data nzuzo, maka ndị ọrụ na-eji ngwa ya na ụlọ ọrụ gọọmentị na mba niile ọ na-arụ ọrụ, mana enweghị ihe akaebe doro anya. Microsoft, n’aka nke ya, gbarụrụ ihu na nsogbu a, ma kpee ikpe na nso nso a iji jụ omume nke kabinet nke obodo ya megide Huawei.
Mmetụta nke nsogbu a n'ozuzu adabala na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere mmekọrịta siri ike na Huawei n'oge gara aga, n'ihi ya, ọ nwere "mmetụta nloghachi" na-adịghị mma na ụlọ ọrụ North America dị iche iche. Maka nke a na ndị ọzọ bụ na mgbochi a nke United States tinyere na Huwei na mpaghara ya apụtabeghị. Agbanyeghị, ọ belatara ntakịrị, dịka enyerela Huawei ntakịrị nnwere onwe na mba ahụ, agbanyeghị na ọ bụghị kpam kpam, nke ka na-atọ ụtọ, ma ọ bụghị n'ụzọ dị mma.
Na ajuju, Onye isi Microsoft Microsoft Brad Smith kwuru na nso nso a "Amachibidoro US na Huawei bụ adịghị mma ma bụrụ onye America". Ọ na-arịọ ka enwekwu nghọta n'okwu Huawei na ọtụtụ ihe akaebe. Na mgbakwunye, o kpughere na mgbe ọ bụla Microsoft bịarutere nso nchịkwa Trump banyere ikpe Huawei, ọ na-enwetakarị nzaghachi na-edoghị anya dị ka, "Ọfọn, ọ bụrụ na ị maara ihe anyị maara, ị ga-ekwenye na anyị." Nzaghachi Microsoft na-abụkarị, “Ọ dị mma, gosi anyị ihe ịmara ka anyị wee kpebie n'onwe anyị. Nke a bụ otú mba a si arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Microsoft kwuru na US anaghị emeso Huawei ihe n'ụzọ adịghị mma
Rovio chọrọ iwepụ ocheeze nke agba kenha egwuregwu mgbagwoju anya si EZE na Sugar Blast!